को हुन ति महान ब्याक्ति भारतले सिमा मिच्यो भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने ? – नेपाली सूर्य
को हुन ति महान ब्याक्ति भारतले सिमा मिच्यो भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने ?
January 24, 2018 August 14, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on को हुन ति महान ब्याक्ति भारतले सिमा मिच्यो भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने ?
काठमाडौं । भारतले वीरगञ्जमा नेपाली सीमा मिचेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हारेका छन् । न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी एरियामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोली प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ ।
‘पुराना पिल्लरको ठाँउमा नयाँ पिल्लर राख्दा नेपालतर्फ चापी सुगौली सन्धी र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्सा विपरीत वीरगञ्ज मा.न.पा. १ छपकैया एरिया सिर्सैया खोलाधार तर्फको लगभग ३०० मिटर नेपालको जमिन मिचि मूल पिल्लर तथा सहायक पिल्लर राख्न खाल्टो खन्ने काम भइरहेको छ ।’ रिट निवेदनमा भनिएको छ,
सुगौली सन्धी विपरीत सीमा स्तम्भहरु गाड्ने काम भइरहेको भन्दै रिटमा नयाँ पिल्लरहरु हटाउन माग गरेका छन् । साथै सुगौली सन्धी र साविकका जंगे पिल्लर भन्दा फरक प्रकृतीले सीमा स्तम्भ गाड्ने कुनै निर्णय भएको भए उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ । वीरगञ्जको छपकैयामा सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा स्थानीय वासिन्दाले आफूहरुको ५० विघा जग्गा मिचिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । तर नापी विभागले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेको छ । pathivaranews
दिनमै १० पटक भन्दा बढी फोन गरेर किन सताउदै छन ओलीलाई मोदीले ?रहस्य यस्तो छ,पढ्नुहोस
तोडिँदै सामाजिक मान्यता : तनहुँमा महिलाले आफैं बोके शव !
November 24, 2017 Nepali Surya